Taariikhda My Butros » 5 Qaas Xagaaga Fikradaha Taariikhda
Last updated: Feb. 25 2020 | 2 min akhri
Xagaaga Waa markii ugu fiican ee dib haraati iyo riyaaqayo asxaabta iyo qoyska si isku mid ah. Waxaa sidoo kale markii ugu fiican si ay u helaan in ay ku raaxeystaan ​​madadaalo, aad taariikhaha ma orod-of-the-dhagaxshiidka. Fiiri shantan taariikhda Xagaaga fikrado gaar ah oo hubin in ay ku baxayn galay Xusuus weyn dheer ka dib heerkulku hoos u dhacay.
Huuri Adventures: Haddii ay jiraan webiga ama wayn u gudubno, a meel masaafad driving, waxaa jira fursad wanaagsan in sidoo kale ay huuri qurbaan kaalinta a (ama kayak) Kiraynta. Qaar badan oo ka mid ah ganacsatada yihiin oo keliya furan bilaha xagaaga, marka hubi inaad jartaan tacaburka fog ku filan ka hor in aadan la dejinayaa la niyad jab ku yimaado in meel keliya si aad u ogaato dhammaan doomaha heli eegtay bixi waayo, maalintii. Inta badan goobaha sida Groupon leeyihiin heshiisyo uu sidoo kale Kiraynta sida, si lacag lagu badbaadinayo iyadoo la isticmaalayo samaynta of mid ka mid ah dalabyada waxa kale oo ay noqon kartaa wax macquul ah. Raashinkiisa geeduhu weelal biyuhu ah in ay sii fiican u adiga iyo taariikhda labada quudin inta aad u quudhin.
Kalaabka ama Mini Golf Caqabadaha: Skip wadiiqo ka bowling madow bilaha xagaaga iyo doortaan mid ka mid ah fursadaha xiiso golofta kuwaas halkii. Iyadoo golf mini damca in a "ammaan" ee xulashada qof hubin / kartida ciyaaraha fudud uu iyada, ayaa in ka badan athletically iilato laga yaabaa dooneynin inuu halis ah oo baadhid koorso golf kalaabka maxalliga ah. Ma aha oo kaliya ay yihiin labada howlahaas fiican ee lagu hayo aamuska sirgaxan xagga gacanka, laakiin waxa ay sidoo kale waa siyaabo weyn si ay u helaan wax yar taariikhda dhow sida aad ku caawiso iyaga ogaado kaamil ah gelinaya foomka / tuuro. Dhamee off taariikhda la safarka ah shack-kale oo ganacsi koorta baraf maxaliga ah sida caadiga ah oo kaliya furan Xagaaga.
Taariikhaha Dog Park: Haddii adiga iyo taariikhda ay jeclaadaan Ogyihiin eey, ma jirto baahida loo qabo in uu ka tago saaxiibbadiinna canine ka dambeeya sida aad madax ka baxay hal habeen oo xiiso leh. Inkastoo ay iska caadi in iyaga la xiri bilaha jiilaalka, ugu parks eey maxalliga ah waa u furan yihiin inta lagu jiro xilliga Xagaaga ee. Haddii ay suuragal tahay, hubi inaad akhrido dib u eegista online iyo cilmi kasta oo ka mid ah shuruuc gaar ah oo gaar ah jardiinooyinka eey hor keeno eygaaga iyo taariikhda iyaga. Haddii ay maya tahay parks eey u muuqdaan inay u furan in aad degan tahay, doorashada si aad u qorsheysato date eey-socodka adiga oo kale oo muhiim ah ayaa sidoo kale waxa uu noqon karaa fursad xiiso leh duwan halkii. Is ogow inay kula socdaan biyo dheeraad ah qof kasta sii raaxo qabow iyo biyo cabaan aad taariikhda inta lagu jiro.
Dibadeed ee Tiyaatarka Fiidkii: Ka faa'iidayso ka mid ah habeenada diiran oo ka sii yara bartaan ku saabsan goobta farshaxanka maxaliga ah. Magaalooyinka badan ayaa bixiya qiimaha la dhimay ama bilaashka ah ee tikidhada dhacdooyinkii tiyaatarka dibadda, qaab laga bilaabo music in ruwaayado Shakespearean in heesta ee riwaayada. Guutooyinkiisa oo maxalliga ah ayaa sidoo kale inta badan u fulineynin ka muuqda goobaha dibadda kala duwan bilaha xagaaga sidoo. Haddii doorasho ma bandhigga fanka dibadda u muuqdaan inay ka jira xaafadaada, tixgelin fiirinayaan in wax tiyaatarada filimada drive-in halkii; inkastoo aan dhawaad ​​la mid ah sida qaab live, kaxayn-in tiyaatarada weli leeyihiin tayo Xisbiyada Mucaaradku qaarkood iyaga.
Geocaching: Iyada oo ay tani farsamo ahaan ma ahan hawl in uu keliya ku koobnayn bilood xagaaga, fursad wanaagsan oo hawada ka fiican Dhab waxba kuma yeeli doonaan fursad oo xiiso leh isagoo inta taariikhda geocaching ah. Amaaho a nidaamka GPS isku duwaha saaxiib ama isticmaasho smartphone si uu kaaga caawiyo in aad search, iyo cilmi geocaches maxaliga ah ka hor inta aan la bilaabin soo taariikhda. U hubso in aad sidoo kale soo weheliyaan xiiso shey aad iyo aad taariikhda u yahay inuu ka tago in kayd ah!
Sidee ayaad ku ogaan Ma Tahay In Love?
Top Tips for Kiss weyn kaaso Just Eebaha